UBUDLELWANO OBUBUKHOMA: UMQONDO OMUHLE NOMA OMUBI - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLOBO
Ubudlelwano Bokubukhoma: Umqondo Omuhle Noma Omubi
Ikhaya Ubudlelwano Ezothando nezothando Ezothando Nezothando oi-Abasebenzi Ngu MadhuBabu | Kushicilelwe: NgoMgqibelo, Novemba 30, 2013, 11:15 [IST]
Umshado yindlela endala yokubopha phakathi kwabantu ukwenza isivumelwano sokuhlangana kwabo ndawonye. Isikhungo esidala kunazo zonke esidlule ekuvivinyweni kwezikhathi futhi samukelwa phakathi neminyaka ngokuya ngamasiko nezikhathi eziguqukayo.
isanqante ilungele ukwehlisa isisindo
Ubudlelwano bokuhlalisana yindlela entsha yobumbano ethatha umqondo womshado. Sivele emasikweni asentshonalanga futhi sangena ebungcweleni bomshado kuwo wonke amasiko emhlabeni jikelele. Ubudlelwano bokuhlala ngokuyisisekelo kungumshado ongekho emthethweni futhi ukuhlangana kwabantu ababili abahlala ndawonye.
Ubudlelwano obuphilayo busazobonwa emazweni amaningi futhi nemithetho isazomiswa ukubhekana nalo mbono. Abantu ababili abaqedela ubudlelwano babo ngaphandle komshado kuseyinto engathandeki emasikweni amakhulu empumalanga. Kodwa-ke, amasiko amaningi asentshonalanga avumelane futhi amukela ubudlelwano bokuhlala obamukelwa iningi lentsha lapho. Iningi labantu lithanda ubuhlobo bokubukhoma ukuze lenze lokhu ngenxa yobulula balo nobunzima balo.
Umshado uyindaba ebizayo edinga isikhathi esiningi nezinsizakusebenza. Ukwehluleka komshado nakho kudinga ubunzima obufanayo ukubhekana nesehlukaniso ngokusemthethweni nangenye indlela. Lapho njengobuhlobo obuhlala khona jikelele kufana nokubuka kuqala emshadweni wakho ukubona ukuthi kuyakusebenzela yini. Ungahlala ukhetha ukushada uma kusebenza noma kwehlukana ngendlela enobunzima uma kubhekiswa eningizimu. Ngamunye wethu unemibono nemibono ehlukile ngobudlelwano bokuhlala.
1. Inkululeko nokuguquguquka ekubeni nobudlelwano bokuhlala yikhona okwenza bukhange kakhulu ezizukulwaneni ezintsha. Imibhangqwana ethintekayo ayiboshiwe yizibopho zomshado ngokusemthethweni nangemithetho ejwayelekile yawo.
Ubudlelwano bokuhlalisana abunazinkinga ezifana nokuhlelela izingane, ukuzijabulisa izihlobo ezikhathazayo, ukwabelana ngakho konke njll. Akukho ukuphoqeleka phakathi kwezithandani ngokwabelana imithwalo yemfanelo.
3. Uma usebudlelwaneni bokuhlala, uzimele ngokwezezimali kumlingani wakho. Akunasibopho sokuhlanganyela umholo wakho nomlingani wakho, unenkululeko yokuhlela izimali zakho ngokuzimela.
Ubudlelwano be-Live-in bungasetshenziswa njengokuhlolwa kokuhambisana phakathi kwakho nomlingani wakho. Kukunika ithuba lokubona ukuthi nihlalisana kanjani nozakwenu ezimeni zempilo yangempela ngenkathi nihlala ndawonye.
Akubona bonke abantu abathanda ubuhlobo obuhlala njalo. Abanye bavame ukubhoreka kumuntu ofanayo ngemuva kwesikhashana. Ubudlelwano bokubukhoma bubafanele kakhulu njengoba bengashintsha abalingani babo lapho omunye eqala ukuzizwa enesithukuthezi ngomunye.
6. Uma kuqhathaniswa nomshado, ukuchitha ubuhlobo bokuhlala kungukuhlangenwe nakho kwamahhala. Azikho izibopho zomthetho okufanele uzifeze ngaphambi kokuhlukanisa izindlela. Kumele ubhekane kuphela nesici esingokomzwelo sokwehlukana.
7. Ebudlelwaneni bokuhlala ukhululekile ukuzibekela eyakho imithetho. Azikho izinkambiso zomphakathi zobudlelwano bokuhlala ezikunikeza isileti esihlanzekile sokubhala eyakho imithetho yobudlelwano.
8. Ukuvumelana nezimo kobudlelwano bokuhlala okunikezwa izithandani kukhulu kakhulu. Abanye abashadikazi abafuna ubudlelwano bokuhlala banikezana ngisho nenkululeko yokuba nabalingani abaningi ngenkathi behlala ndawonye.
9. Abashadile ababambe iqhaza ebudlelwaneni bokuhlala akudingeki badele noma balungise izindlela zokufanelana. Unenkululeko eningi yokuba uqobo lwakho uma usebudlelwaneni bokuhlala. Akunampoqo wokuyekethisa imvelo yakho ukuze uzwane nomlingani wakho.
10 Okokugcina kepha okukhanga kakhulu kobudlelwano bokuhlala kubantu abaningi yisici 'sesehlukaniso'. Lapho kungekho ukusebenzisana ngisho nangemva kwensimbi yokuhlala ndawonye, ​​izithandani zinganquma ukuhlukana ngaphandle kwezingqinamba zokudivosa.
izinzuzo zamafutha wesinaphi okupheka
ukuzivocavoca kwemvelo ukwandisa usayizi wepennis
imibono emihle yokumangaza isoka lakho
iphakethe lobuso nsuku zonke lesikhumba esihle